January | 2020 | BCM Nepal
7 months ago by bcmnepalसमाचार
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले बलुवाटारस्थीत ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले तयार पारेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमा बुझाएको प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयमा बुझाएको उनले… Read More
7 months ago by bcmnepalरोचक
काठमाडौं । अधिकांश महिलाको सपना नै हुन्छ, स्लीम र आकर्षक देखिनु । यसका लागि उनीहरु जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । तर, संसारमा यस्ता पनि देश छन्, जहाँ स्लीम महिलालाई आकर्षक ठानिदैंन । अफ्रिकाको मौरिटानिया एक यस्तो देश हो, जहाँका महिला पातला र स्लीम भएको… Read More
के तपाइलाई थाहा छ ? फोनमा भनिने ‘हेल्लो’ शब्दको सुरुवात कसले गर्यो !
काठमाडौं । फोनमा कुरा गर्दा सबैभन्दा सुरुमा भनिने शव्द ‘हेल्लो’ को सुरुवात कसले गर्यो होला ? किन अभिवादनका अन्य शव्दहरु हुँदाहुँदै पनि हेल्लो शव्दकै प्रयोग गरिन्छ होला टेलिफोन संवादमा ? वास्तवमा हेल्लो शब्दको आविष्कार मानिसहरुबीचमा आपसी कुराकानीलाई बढावा दिनका लागि भएको थियो । यो शव्द… Read More
7 months ago by bcmnepalस्वास्थ्य
काठमाडौं । रसुवा जिल्लामा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित बिरामी हालसम्म फेला नपरेको चिकित्सकले बताएका छन् । रसुवा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अनिलकुमार खरेलले नेपाल–चीन छिमेकी देशबीचका नागरिक आवतजावत गर्ने सीमा क्षेत्र भए पनि जिल्लामा कोरोना भाइरसका बिरामी हालसम्म फेला नपरेको स्पष्ट गर्नुभयो । चिकित्सकको प्रमाणित… Read More
कपुरधारामा छैन खानेपानीको धारा
काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागको नजिकै खानेपानीको धारा छैन भन्दा सुन्नेलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ कपुरधाराको अवस्था भने यस्तै छ । खानेपानीको धारा नभए पनि पहिले जमीनमुनिबाट पानी निकालिन्थ्यो । पहिले ६० फिटमै पानी आउने भए पनि हाल १२० फिट तल… Read More
7 months ago by bcmnepalराजनीति
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई व्यापक बनाउँदै लैजाने बताउनुभएको छ । शहीद स्मारक जनस्वास्थ्य क्याम्पस सिफलको ११औँ वार्षिकोत्सवमा उहाँले नेपाली माटोमा सुन फलाउन सकिने भन्दै दक्ष जनशक्तिविना मुलुकको कायापलट सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा काम… Read More
राजधानीका यी स्थानमा भोली दिनभर बत्ती नआउने
काठमाडौं । शनिबार राजधानीका केहि स्थानमा दिनभर बत्ती नहुने भएको छ। शनिबार धापासी फिडरबाट वितरित लाइन बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म अवरुद्ध हुने भएको हो। नेपाल वन निगम लिमिटेडले चक्रपथ विस्तार कार्यको लागी रुख कटानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै उक्त फिडरअन्तर्गत… Read More
काठमाडौं । पाँचखाल नगरपालिका–८ खटार पाँडुलास्थित उपकार इँटा उद्योगका एक मजदूर आज बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । भारतको दरभङ्गा निवासी ४८ वर्षीय भोली सदाय बिहान ८ बजे मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका… Read More
के हो ह’स्तमैथुन ? किन धेरैले ह’स्तमैथुन गर्छन् ?
काठमाडौं । युवायुवतीहरूले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक च’रम यौ’न आ’नन्द लिने माध्यम नै ह’स्तमैथुन हो भन्दा फरक पर्दैन । ह’स्तमैथुन यति नै पटक गर्न मिल्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने निश्चित मापन छैन । युवायुतीहरूले राख्ने यौ’न जिज्ञासालाई विश्लेषण गर्दा ह’स्तमैथुन र यससँग सम्बन्धित खुल्दुली एक नम्बरमा… Read More
यौ’नइच्छा नभएकी युवती कस्तो परिवार चाहन्छिन् ?
हँसिलो मुहार अनि ख्याल ठट्टा गर्ने बानी भएकी सन्ध्या सधैं स्टाइलिस पहिरनमा देखिन्छिन् । जब-जब उनले आफ्नो उमेर ४० वर्ष भएको बताउँछिन्, पहिलो पटकमा कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् । तपाईं त ३० वर्ष जस्तो लाग्छ, ४० वर्ष त कतैबाट पनि देखिनु हुन्न । यसको रहस्य… Read More